परमेश्वरको राज्य चाँडै आउँदैछ! के तपाई तयार हुनुहुन्छ? - jwjw.org
सामग्री नेभिगेसनमा जानुहोस्
परमेश्वरको राज्य चाँडै आउँदैछ! के तपाई तयार हुनुहुन्छ?
मुख्य कार्यहरू बाहेक
प्रवेश अगाडि पृष्ठ
अर्को प्रवेश: सामग्रीहरू
बाहेक पोष्ट गर्नुहोस्
मेटा पोस्ट गर्नुहोस्
पोस्ट प्रकाशित, परिमार्जित
पोस्ट प्रकाशित भयो
प्रकाशित मिति र समय टिकट प्रकाशित
23 जनवरी 2018 , 18:32:35
पोष्ट परिमार्जित मिति र समय टिकट
प्रकाशित पोष्ट लेखक
प्रतिक्रियाहरू कार्य स्निपेट
टिप्पणी अक्षम छ।
समय धेरैको लागि झन् झन् धेरै अलमल्लमा पर्ने बित्तिकै परमेश्वरको वचन डब्ल्यू होhat व्यक्तिहरूले हेर्नु पर्छ। यो सत्यको उज्ज्वल बीकन हो जसले मानिसहरूलाई सर्वशक्तिमानको उपासना सीधा बनाउन मद्दत गर्दछ।
त्यहाँ धेरै पुरुष र संगठनहरू छन् जुन मानिसहरूले उनीहरूलाई खोजोस् भन्ने चाहन्छन्, दाबी गर्छन् कि परमेश्वरको समर्थन छ र शक्तिशाली संकेतहरू गर्दैछ। तर परमेश्वरका वास्तविक मानिसहरू धोकामा पर्नेछैनन्। मानिसको वचनले मात्र निराशा निम्त्याउँछ। यर्मिया 10: 23
परमेश्वरका प्रेमीहरूले सँधै आश्वासन र निर्देशनका लागि परमेश्वरका सन्देशहरूमा ध्यान दिनेछन्। यस साइटले मानिसहरूलाई आफ्नो विश्वासको जाँच गर्न र तिनीहरूको पूजालाई समायोजित गर्न आवश्यक छ, यदि आवश्यक परे, सर्वशक्तिमान परमेश्वरसँग अझ राम्रो सम्बन्ध बनाउनको लागि आउँछ। प्रेरित 17: 11-12
के तपाईंले आफ्नो विश्वास जाँच गर्न आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ? त्यो वास्तवमा के हो महान विरोधी सर्वशक्तिमान तपाईं सोच्न चाहन्छ। ऊ परमेश्वर भन्दा मानिसका वचन पछ्याएको उहाँ चाहनुहुन्छ। जटिलता खतरनाक हुन सक्छ।
अन्यजाति कालको अन्तिम अवधिमा, जसलाई धेरैले "अन्तको समय" भनेर पनि चिनिन्छन्, त्यहाँ आध्यात्मिक जागरण हुनेछ र टेढो शिक्षाबाट सफा हुनेछ। यद्यपि, आध्यात्मिक तवरमा शुद्ध हुन, कसैले परमेश्वरबाट टेढो वचन र बisted्ग्याएको शिक्षाको सट्टा परमेश्वरबाट सीधै बाइबलीय सत्यहरू बुझ्न आवश्यक छ। परमेश्वरको प्रेरित धर्मशास्त्रतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर, यो साइटले सत्य खोजी गर्नेहरूलाई अझ बढी गर्न मद्दत गर्छ!2तिमोथी 3: 16-17
तलका बाइबल कथाहरू र शीर्षकहरूमा स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। टिप्पणी गर्न स्वतन्त्र महसूस गर्नुहोस् (यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने उपनाम प्रयोग गर्नुहोस्) र दिमागमा अनुसन्धान गर्नुहोस् जुन तपाइँले भगवान्‌ले दिनुभएको छ। याद गर्नुहोस्, यो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले साँचो बुद्धि दिनुहुन्छ। मानिस होइन। परमेश्वरबाट सत्यको खोजी गर्नु एउटा सम्मानजनक कुरा हो। येशूको समयमा जस्तै थुप्रै धार्मिक संगठनहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई यसको खोजी गर्नबाट जोगाउन डर वा चिन्ता जगाउँछन्। तर यदि कुनै संगठनले उनीहरूसँग सत्य छ भन्ने विश्वास गर्दछ भने, उनीहरूको शिक्षालाई परीक्षण गर्न डराउनु हुँदैन किनकि ती गलत साबित हुन सक्दैनन्। त्यसोभए किन यति धेरै धार्मिक संगठनहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई परमेश्वरको सत्यता खोजी गर्नबाट रोक्छ? उनीहरू आफ्नो संगठनको सुरक्षा गर्न अझ बढी डराउँछन् तब उनीहरू परमेश्वरको सत्यता खोजी गर्छन्! उनीहरूको स for्गठनप्रति तिनीहरूको प्रेम परमेश्वरप्रतिको प्रेमभन्दा कडा छ। आशा छ, तपाईं कुनै पनि त्रुटिपूर्ण मानिस वा संगठन भन्दा भगवान लाई अधिक प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईको खोजीलाई आशिष् दिनुहोस्! भजन ११:: १119- १२०: २ ;मत्ती 6: 33
कुनै टिप्पणी छैन।
परमेश्वरको राज्य चाँडै आउँदैछ! के तपाई तयार हुनुहुन्छ? © 2021 DysineLab द्वारा आवेदक
नेभिगेसन सुरू गर्न जानुहोस्
एरो आइकन एरो अप आइकन एरो आइकन २ आईकन खोज्नुहोस् खारेज चिन्ह बर्गर आइकन अधिक चिह्न एरो अप-डाउन आइकन